Dood ka taagan cidda uu xilka kala wareegayo Ra'iisul Wasaaraha cusub | KEYDMEDIA ONLINE
Dood ayaa ka taagan xil wareejinta Ra'iisul cusub, taasoo u dhaxeyso sii haya Xukuumadda iyo Ra'iisul Wasaarahii hore.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa in uu maalinta Axadda ah si rasmi ah ula wareego xilka Ra'iisul Wasaaraha, si uu dar dar geliyo howlaha horyaallo.
Durbaba waxaa soo baxeyso dood ku aadan sharci ahaansha cidda uu xilka kala wareegayo Raiisul Wasaaraha, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Mahdi Guuleed oo ahaa sii haye la doonayo in uu xilka ku wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha cusub.
Mahdi Guuleed ayaa 50 cesho hoggaanka u hayay Xukuumadda xil-gaarsiinta, wuxuuna shir guddoomiyay dhowr shir oo ay qabteen golaha Wasiirada, kuwaas oo lagu ansixiyey sharciyo la sheegay in dano gaar ah ay ku hoos duuganyihiin.
Macaaluumaad ay heshay KEYDMEDIA ONLINE ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre uu warqad rasmi ah u qoray Ra'iisul Wasaare Rooble, kuna ogeysiiyay Madaxweynaha, Guddoonka Labada Aqal iyo Maxkamadda sare oo ah inuu isaga xilka ku wareejiyo sifo sharci ah, ayna tahay xogo iyo dukumentiyo qaranka ku saabsan uu ku wareejiyo Raiisal Wasaaraha sida sharciga ah Golaha Shacabka u ansaxiyay.
Mahdi Guuleed ayaa dhawaan magacaabay guddiga xil wareejinta Ra'iisul Wasaaraha cusub, taasoo shaki hor leh sii abuurtay, islamarkaana muujineyso in Mahdi Guuleed uu rabo in uu xilka isaga lagala wareego, maadaama uu sii hayay Kursiga Ra'iisul Wasaaraha.